Facebook ကငါ့အကောင့်ပိတ်ထားသည် Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, ဇန်နဝါရီလ 16, 2011 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်၏ Facebook စာမျက်နှာများကိုပိတ်ထားသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ Facebook အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်၏ Facebook အကောင့်ပိတ်ထားသည်။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုပြန်လည် reset လုပ်ရသည် - Indiana ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှကျွန်ုပ်၏အကောင့်ဖြင့်တစ်ယောက်ယောက်က login လုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည်ကို Facebook ကမြင်ခဲ့သည်။ ငါဒီအဖြစ်အပျက်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိမသေချာဘူး။
သင်ငါ့ကိုမေးလျှင်တော်တော်မိုက်မဲ ဒါ့အပြင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နဲ့အခြားပလက်ဖောင်းတွေကိုမင်းရဲ့အဓိကဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအဖြစ်မှီခိုခြင်းမပြုပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တွင် Facebook ရှိအသင်းများနှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများရှိကြသည် - ကျွန်ုပ်အကောင့်ကိုပြန်လည်ဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုကြည့်မည်။ ငါလုပ်ပြီးပြီ သူတို့ရဲ့အကူအညီစာမျက်နှာမှတဆင့်တောင်းဆိုပါ.
1:33 PM ဒီမှာချက်ချင်းအကြောင်းကြားချက်တွေအားလုံးကိုဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်
ဘေးဘက်မှတ်စုတစ်ခုမှာ - မိဘတစ် ဦး အနေနဲ့ငါလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ Facebook အကောင့်မှတဆင့်ကျွန်ုပ်၏သမီးကိုမျက်ခြည်မပြတ်နိုင်ပါ။
1:36 PM ဒီမှာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကနေလက်ခံရရှိတဲ့အီးမေးလ်တစ်စောင်
Awesome Authors Beta သည်တိုက်ရိုက်ဖြစ်သည်
16:2011 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 7, 00
ခွေးမသား! ဘာ ၀ န်လဲ။
16:2011 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 7, 16
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကသင့်ရဲ့ Tweets တွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာထည့်ထားတာကိုအမှတ်အသားပြုထားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ 😉
အကုန်လုံးရယ်စရာကောင်းတာပေါ့၊ သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအကြံဥာဏ်ပေးတယ်။ သင်၏ Facebook တည်ရှိမှုကိုသင်မပိုင်ဆိုင်ပါ။ Facebook ကလုပ်တယ်။
16:2011 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 7, 20
ငါ Chuck အကြောင်းစဉ်းစားမိတယ် ငါကသူတို့ရဲ့ Twitter ကိုပေါင်းစည်းမှုအင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြု။ ကတည်းကငါမိုက်မဲပုံရသည်!
16:2011 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 7, 22
ကျွန်ုပ်တွင်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာရှိပြီးစာမျက်နှာများစွာ၊ သူငယ်ချင်းများစွာရှိသောကြောင့်ရယ်စရာပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Facebook တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
16:2011 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 8, 51
ကင်လုပ်ခိုင်း, Doug ။ သတိထားစရာမလိုဘဲယင်းကိုပိတ်ထားလိမ့်မည်မှာအလွန်ကြောက်စရာပင်။ ယူသွားလို့ရတဲ့အရာအားလုံးကိုအလွယ်တကူမစဉ်းစားခဲ့ဘူး။
လူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်တွစ်တာတို့၏“ ဂုဏ်သတ္တိများ” သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြခြင်းမှာမနက်ဖြန်တွင်ပင်ရှိလိမ့်မည်ဟူသောအာမခံချက်မရှိပါ။
16:2011 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 10, 55
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယောလ။ ငါ # ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့ကြော်ငြာကိုငါလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြောင့်အတော်လေးယုတ္တိမတန်ပုံရတယ်။ PR ပြောရရင် PR နဲ့တခြားနည်းလမ်းတွေကိုပြောတာ။
16:2011 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 11, 02
တနင်္လာနေ့, Doug, တူညီတဲ့အရာငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏တူညီသောယေဘူယျအီးမေးလ်ကိုကျွန်ုပ်လက်ခံရရှိခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲပြီးသောနောက်။ ၇ မိနစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာ / အတိအကျနှင့် ပတ်သက်၍ FB ထံမှတရားဝင်ရှင်းလင်းချက်မရှိခြင်းကြောင့်စဉ်းစားရခက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ Navy Vets app တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်အုပ်စုရှိအခြားသူများနှင့်ဖြစ်ပျက်ခြင်းရှိ၊
16:2011 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 11, 16
ဒါစိတ်ဝင်စားစရာပဲမိုက်ကယ်။ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကျွန်တော်တွေးမိတယ် - အလိုအလျောက်လုံခြုံရေးလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုလိုအသံထွက်နေသည်! #FB
ဇန်နဝါရီ 17, 2011 မှာ 12: 30 AM
ကျွန်ုပ်အပါအ ၀ င် ၄ င်းတို့၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၁၀ ယောက်စလုံးဒီနေ့သူတို့ရဲ့ #Facebook အကောင့်တွေကိုပိတ်ထားပြီဆိုတာကို client ဆီကမှတ်စုတစ်ခုရခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တွင်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်၊ သို့သော်သူတို့၏စာမျက်နှာပေါ်တွင်အမှန်တကယ်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ဒီဟာကဒါနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိမ့်မယ်။ ငါလည်းဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာအကောင့်အများကြီးပိတ်ထားတဲ့အတွက်ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းဖတ်ခဲ့တယ်။ သင်တို့အားလုံးကိုငါတင်ထားပေးမယ်။
17:2011 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 2, 29
Doug, ငါသူတို့သင်တို့အဘို့ဖြေရှင်းနိုင်ရလိမ့်မယ်သေချာပါတယ်။ သင့်တွင်ဖောက်သည်သန်း ၅၀၀ ရှိပါကအကူအညီအများစုတွင်အကူအညီနှင့်ပြည့်စုံပါကသင့်အားကောင်းမွန်သောအလိုအလျောက်စနစ်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုမွမ်းမံထားပါ။ သင်မည်သည့်အရင်းအမြစ်ကိုမှအားမကိုးနိုင်ကြောင်းအာမင်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ပြိုကျပြီး Facebook တက်လာနိုင်သည့်အလားအလာ (ဖြစ်နိုင်သည်ထက်ပိုများသည်) သည် Facebook ကိုထိုသို့မထိခိုက်စေပါ။
အရာရာမှားသွားပြီ။ - Chris Isaak
17:2011 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 2, 38
Kenan ကြည့်ရအောင် ဤအတွေ့အကြုံ၏ဆိုးရွားလှသည့်အပိုင်းမှာကျွန်ုပ်သည် Facebook ကိုစတင်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်အင်တာနက်ကိုပိုင်ဆိုင်ရန်ကြိုးစားခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အပျက်သဘောဆောင်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါဒီဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် Facebook မှာကမ္ဘာမြေတစ်ဝက်နီးပါးလောက်မှာမင်းတို့ရဲ့နည်းစနစ်တွေကအနက်ရောင်နဲ့အဖြူရောင်တွေသာမဟုတ်ဘူးလို့သင်ထင်လိမ့်မယ်။ သံသယဖြစ်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုရှိလျှင်သူတို့ကငါ့ကိုအကြောင်းကြားနိုင်မည်။
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်သည် Facebook တွင်ငွေပေးချေခြင်းခံထားရသောကျွန်ုပ်အသင်း ၀ င် ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်၏ရပ်ကွက်များဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက် Facebook ကြော်ငြာများကို ၀ ယ်ပြီးဖြစ်သည်။ ချက်ချင်းဆိုသလို၊ ကျွန်ုပ်၏ဗဟုသုတမရှိဘဲနှင့်မည်သည့်နည်းလမ်းကိုမျှပြန်လည်အသုံးချခြင်းမရှိဘဲအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်သည်။ သူတို့က Facebook ကိုကြော်ငြာတာ၊ ကြော်ငြာတွေ ၀ ယ်တာ၊ ဒါကိုဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ညှိနှိုင်းတာတွေလုပ်ရတာကပိုပြီးတာ ၀ န်ရှိတယ်လို့ထင်ရတယ်။
18:2011 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 1, 18
Doug၊ ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ထဲဝင်ရောက်ရန်ကြိုးစားပြီးနောက်ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တွင်အလားတူအီးမေးလ်ကိုကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သည်။ ငါအရာအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှမတုံ့ပြန်ပါ။
ဇန်နဝါရီ 19, 2011 မှာ 12: 22 AM
ကျွန်တော့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော့်အကောင့်ကိုဖွင့်ထားပါတယ်။ အီးမေးလ်မရှိ၊ သတိမပြုမိဘဲပြန်ဖွင့်လိုက်သည်။
19:2011 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 1, 56
စိတ်ဝင်စားစရာ, Doug ။ (၁/၁၀ မှစ၍) မိုင်းသည်ရပ်တန့်နေဆဲဖြစ်သည်။ ယနေ့နံနက်ကသူတို့ယေဘူယျအီးမေးလ်ကိုဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်သင်မှန်တယ်၊ ဒါကကုမ္ပဏီတွေကို FB 1% ကိုသူတို့ရဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့အားကိုးအားထားပြုဖို့ဘယ်တော့မှမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုထပ်လောင်းအတည်ပြုပေးတယ်။
ဇန်နဝါရီ 19, 2011 မှာ 3: 29 AM
လွန်ခဲ့သော ၁၀ ရက်ကကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ နေ့တိုင်းဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုကျွန်တော်စာရေးခဲ့တယ်။ သူတို့ကိုဖုန်းဖြင့်မခေါ်ပါနှင့်။ ။ ။ သူတို့မဖြေကြဘူး ဖောက်သည်များ၏ထောက်ခံမှုသည်အလွန်ဆိုးရွားသည် - အမှန်တကယ်မရှိသော သူတို့ဘယ်လောက်“ ဖော်ရွေတတ်တယ်” လို့ပြောတဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်ရယ်စရာ! ပြitနာရှိရင်မဟုတ်ဘူး။
ယနေ့ Facebook ပိတ်ထားသည်။
21:2011 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 2, 54 တွင်
ယနေ့ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်ပိတ်ထားသည် ဒါပေမယ့်ငါအီးမေးလ်ပို့နေတုန်းပဲ။ ငါ့ကောင်မလေးကငါ့ရဲ့နာမည်ကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာအုပ်စုတစုစဖွင့်တာတောင်သူတို့ကပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။
မတ်လ 5, 2011 မှာ 4: 19 pm တွင်
ဟိုင်းငါ့နာမည်တာရှာ ကျွန်ုပ်၏အကောင့်သည်လွန်ခဲ့သော (၃) ပတ်ကကဲ့သို့ပိတ်ထားခံရသည် ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ၀ န်ထမ်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့အချိန်အများကြီးကုန်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်ကြားချက်မရသေးဘူး။ သူတို့ကသူတို့လည်းသူတို့ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်သည်ဟုဆိုသောကြောင့်သူတို့ပြန်ဖြေသည်အထိငါအခြားစာမျက်နှာဖန်တီးလို့မရပါဘူး။ ဒါဆိုငါဘာလုပ်ရမလဲ။ ကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်နှင့်ကျွန်ုပ်လိုအပ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးသည် Facebook ပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်နာမည်နှင့်နောက်ဆုံးနာမည်ကြားထဲမှာနာမည်ပြောင်ရှိခဲ့ဖူးပေမဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိမပြုမိခဲ့ပါဘူး။ မကောင်းတာက Facebook ကနေတုန့်ပြန်မှုမရတော့ဘူး။ တစ်လနီးပါးစောင့်နေတယ်။ ငါစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ Facebook ကိုတုန့်ပြန်မှုတစ်စုံတစ်ရာမရရှိသေးခင်မှာငါအကောင့်အသစ်တောင်တောင်မဖန်တီးနိုင်ဘူး။ လူကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ ???
ဧပြီ 3, 2011 မှာ 6: 12 AM
ဟိုင်းငါ့နာမည်ရှာရုန်ပါ ကျွန်ုပ်၏ fb အကောင့်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင်သတိပေးခြင်းမရှိပဲပိတ်ထားပြီးအဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျွန်ုပ်တွင်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားလုံး fb ရှိ၍ ကျွန်ုပ်ပုံမှန်ရရှိသောအလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောနောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်အချက်အလက်များမှထွက်ခွာသွားခြင်းအတွက် ၀ မ်းနည်းမိပါသည်။ ဒါဟာ fb ကိုမမှီဖို့ပြောဖို့လွယ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မိသားစုတွေက fb ကိုသာမှီပြီးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆက်သွယ်ဖို့ fb ကိုအားကိုးမယ်ဆိုရင်ငါဘာရွေးစရာလဲ။ ငါသူတို့ကိုအရမ်းလွမ်းတယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကစပြီးလယ်ကွင်းမှာကစားခဲ့ရတာကိုငါလက်လွတ်ပြီးအဲဒါကိုတကယ်ငွေသားသုံးခဲ့တယ်။ အားလုံးရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဆုံးက fb ဆီကပြန်ကြားချက်မရှိသေးဘူးဆိုတာပဲ။ ငါကပြန်လာသောလိမ့်မည်အလိုရှိ၏ !!
26:2011 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 1, 50
ငါကမင်းနဲ့အတူတူပဲ။ ကျွန်ုပ်ကွယ်လွန်ခဲ့သောစေ့စပ်ထားသည့်ကျွန်ုပ်၏ကလေးသူငယ်များပုံများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်ကျွန်ုပ်၏အကောင့်တွင်ရှိနေပြီးသူတို့ကိုကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မှပြန်လည်ရယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါလော။ ဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်တုန့်ပြန်မှုသို့မဟုတ်ဘာမှမပါဘဲမသန်မစွမ်းဖြစ်ခဲ့ပါသလား။ ကျနော့်စာမျက်နှာမှာဘာမှမသင့်တော်ဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်ကိုမပိတ်ခင်ဒီအရာတွေကိုသူတို့စုံစမ်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ အဲဒါကစိတ်ပျက်စရာကောင်းပေမယ့်လုပ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးထင်တယ်။ မဖြောင့်
Allysa stephanie Belo ဖြစ်သည်
3:2012 pm မှာဇွန် 4, 46
ဇွန်လ 1, 2012 တွင် 2:55 pm အချိန်မှာကျွန်တော်မှားယွင်းစွာရပ်ဆိုင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ့အကောင့်ကိုပြန်ရခဲ့ပေမယ့်ဇွန် 2, 2012 1:04 pm တဖန်ငါမသန်စွမ်းခဲ့ပေမယ့်ကတည်းက ငါနင့်ကိုမတွေ့ရဘူးလို့ငါမထင်ဘူး .. ဟိုင်ဟီ .. ဒါပေမယ့်ငါ Phil ကိုပို့လိုက်တယ်။ စာတိုက်အိုင်ဒီနှင့်မွေးစာရင်း။ NSO ကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန် ၁ ရက်ကကူးယူလိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုအတည်ပြုပြီးမှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာအတည်ပြုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဇွန် ၃၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာငါမသန်မစွမ်းဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီမှာဂိမ်းတွေအတွက်တကယ့်ငွေတွေကိုငါသုံးပြီးဇွန်လ ၂ ရက်နေ့မှာပြန်ဝယ်လိုက်တယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ကျွန်ုပ်ဟာနောက်တစ်ခါမသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း၊ အာရှ၏ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခြင်းခံရနိုင်တယ်လို့ဇွန်လ ၂ ရက်ကပြောကြားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့ ၀ င်ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်ထပ်မံမသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်တနင်္လာနေ့ fb အဖွဲ့၏ပြန်ကြားချက်အပေါ်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ထားသည့် fb စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်းမရှိဟုကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းကပြောကြားခဲ့သည်။